Ny fifidianana UNWTO dia nahatonga an'i Alain St. Ange ho iray tapitrisa tapitrisa
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovaom-panjakana » Ny fifidianana UNWTO dia nahatonga an'i Alain St. Ange ho iray tapitrisa tapitrisa
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Alain St. Ange dia nahazo ny fankatoavan'ny minisitry azy hifaninana amin'ny Fifidianana UNWTO
Nanomboka tamin'ny fanamarihana falifaly ny 23 martsa 2017 tao Berlin tao amin'ny ITB Function izany rehetra izany, rehefa nanohana ny minisitry ny fizahantany Seychelles Loustau-Lalanne ho minisitry ny sekretera jeneralin'ny UNWTO eo alohan'i Taleb Rifai ireo izay nivoaka UNWTO SG.
Ampahany lehibe eto amin'izao tontolo izao no miray saina amin'ny fahatakarana ny Fifidianana UNWTO ho an'ny Sereter amin'ny 2017 dia tsy namarana ny fomba tokony nananany. Ny fisolokiana, ny kolikoly, ny tsy fanarahan-dalàna ary ny maro hafa dia notaterina nandritra ny fizotran-toerana niarovana ny toerana misy ny sekretera jeneralin'ny UNWTO Zurab Pololikashvili
Iray amin'ireo mpifaninana hifaninana amin'ity toerana ity tamin'izany Andriamatoa Alain St. Ange. Tsy noraisiny ho toy ny fanomezana ny nanjo azy. 4 taona taty aoriana dia natolotry ny fitsarana ambony any Seychelles tanindrazany 7 tapitrisa Rupee Seychelles 526,000 tapitrisa na onitra XNUMX $ eo ho eo ny alakamisy teo.
Betsaka eto amin'izao tontolo izao no manontany hoe inona no mety ho fandroson'ny UNWTO tamin'ity krizy COVID ity miaraka amina mpitondra hafa tompon'andraikitra?
The UNWTO azo antoka fa mangarahara kokoa, haino aman-jery, ary misokatra amin'ny sehatra tsy miankina sy ny governemanta mpikambana rehetra ao amin'ny masoivoho mikambana UN.
Nametraka fitoriana tany Seychelles i St. Ange tamin'ny Oktobra 2017 taorian'ny nanesoran'ny governemanta azy manokana azy hijoro amin'ny fifidianana UNWTO. Faly 2 andro talohan'ny fifidianana nandritra ny fivorian'ny UNWTO Executive Council tany Madrid. Tsy nampoizina izany ary tena nahamenatra an'i Kandidà St. Ange, ny mpanohana azy ary ny sekretera jeneraly teo aloha Rifai sy ny maro hafa.
Nanao kabary feno fientanam-po izy talohan'ny fifidianana dia tsy navela hifaninana intsony.
Lahateny ara-pihetseham-po nataon'i Alain St Ange tao amin'ny UNWTO Executive Council tamin'ny taona 2017 taorian'ny nanilihana azy ho kandidà UNWTO
Alain dia tia gazety, tia olona izy ary mpanohana lehibe ny indostrian'ny fizahan-tany sy fizahan-tany tsy miankina. Raha minisitry ny fizahantany ho an'i Seychelles izy dia nanomboka ny Karnavaly Victoria, hetsika iray izay nitondra karnavaly sy mpitsidika avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao ho any amin'ny fanjakana nosy kely. Karnavaly, izay nilahatra nanomboka tany Trinidad, Nottingham, Cologne hatrany Rio de Janeiro any Seychelles dia mbola miresaka momba izany.
Mampalahelo fa tsy nanana fotoana nifidianan'ny firenena mpikambana ao amin'ny UNWTO i St. Ange.
I Africa dia nahazo ny faran'ny fohy tapa-kazo dia ahiahy lehibe nandritra ny fifidianana, ary nivadika ho zava-misy mampalahelo izany araka ny filazan'ny maro.
Tamin'ny taona 2017 dia nisy mpitondra afrikanina roa nanandrana nitondra an'i Afrika ho amin'ny sehatry ny fizahantany manerantany: Dr. Walter Mzembi, minisitry ny fizahantany afrikanina naharitra indrindra tamin'izany fotoana izany avy any Zimbabwe, ary Alain St.Ange avy any Seychelles.
Ny vondrona afrikanina dia nanohana an'i Dr. Mzembi ho kandidà ho an'i Afrika, izay nohamafisin'i Seychelles ihany koa tamin'io fotoana io. Miaraka amin'ny mpirotsaka hofidina roa avy any Afrika dia nanjary fanamby lehibe ny fahafahan'ny Africa manendry ny iray ho azy ireo ho sekretera jeneraly.
Zimbabwe notarihin'ny filoha Mugabe dia nanosika ny Vondrona Afrikanina hanery an'i Seychelles mba tsy hamela an'i Alain St.Ange hihazakazaka. Ny tsindry hazo lena tany Seychelles dia goavana ary nandrahona ny sazy afrikana.
Ny governemanta Seychelles dia nanome minitra vitsy monja talohan'ny fifidianana ary nisintona mafy an'i St.Ange tamin'ny fifidianana.
Tena mahamenatra ho an'ny Kandidà St. Ange izany, fa koa ho an'ny UNWTO, ary ny fahamendrehan'ny fizotry ny fifidianana. Mampalahelo fa ity dia iray monja amin'ireo olan'ny fampivoarana mampivadi-po izay nanamafy ny kandidà tany Georgia tamin'ny naha sekretera jeneraly ny UNWTO General Assembly tao Chengdu, Sina.
Africa dia nanana ny tapa-kazo fohy hatramin'ny voalohany, nanomboka tamin'ny taona 2017 rehefa eTurboNews nanoratra hoe: Misy maimbo any Madrid.
Tamin'ny farany, tafita tamin'ny laharana faharoa i Mzembi ary resin'i Zurab Pololikashvili. Ity publication ity dia nitatitra momba ny filalaovan'i Zurab lalao maloto amin'ny fanasoavana sy fampanantenan-tena mampiahiahy hiantohana ny vatony.
Alain St.Ange dia mamaky ny diany manokana amin'ny toeran'ny sekretera jeneralin'ny UNWTO
Alain St.Ange dia nahatsapa fa notsaboin'ny fitondrana azy manokana izy ary tsy nitsahatra nilaza ny heviny. Nanenjika ny governemantany izy ary nandresy. Taorian'ny nandreseny ny fitoriana dia nisy fitoriana napetraka ary ankehitriny dia mbola nandresy bebe kokoa izy. Izany rehetra izany dia niseho tamin'ny Alakamisy, omaly.
Ny Fitsarana Tampon'i Seychelles dia namoaka didim-pitsarana androany (12 Aogositra 2021) momba ny raharaha minisitry ny fizahantany taloha, Alain St.Ange.
Maninona i Alain St. Ange no hahazo vola 7 tapitrisa dolara ho an'ny fifidianana UNWTO very?
St.Ange, izay nanao fampielezan-kevitra tsy an-kijanona ho an'ilay andraikitra nahazo fatiantoka lehibe ara-bola tamin'ny fizotran-toetra nitady ny tenany ho sekretera jeneralin'ny UNWTO afrikanina voalohany.
Ny fanapahan-kevitra hisintona ny filatsahany ho fidiana dia noraisin'ny governemanta Seychelles taorian'ny fanerena henjana navoakan'ny Vondrona Afrikana izay nandrahona ny sazy ara-toekarena.
Ny filoha Seychelles, noho izany, dia nanafoana ny fanendrena an'i St.Ange raha efa nanatrika ny fivorian'ny UNWTO Executive Council tany Madrid izy, 2 andro talohan'ny fifidianana.
Rehefa niverina nody i St.Ange dia nankany amin'ny fitsarana izy ary notohanan'ny Fitsarana Tampony, notarihan'ny mpitsara Melchior Vidot, rehefa nahazo onitra izy tamin'ny sandan'ny Rs164,396.14 cents (12,366 dolara amerikana)
Ity vola ity dia tsy nanonitra ny lavitra akory ny fandaniam-bola nataon'i St.Ange tamin'ny fampielezan-kevitra ho an'ny fifidianana. Nanome toromarika ireo mpisolovava azy izy mba hampiakatra fitsarana ambony momba ny fahasimbana fotsiny. Nanampy fanaintainana sy fahafaham-baraka ary fahasimbana ara-tsaina koa izy noho io tranga io.
Rehefa afaka taona maro, dia vitaina ihany io raharaha io teo amin'ny Fitsarana ambony, fitsarana ambony any Seychelles. Raha nangataka ny hampiatoana tanteraka ny raharaha ny mpisolovava, dia nampakatra fitsarana ambony i St.Ange.
Nomarihiny tamim-pahatsorana fa ny vola natolotra tamin'ny ambaratonga avo momba ny Fitsarana Tampony dia zara raha nahafahana nanefa ny saram-pianianany, nefa tsy nanao afa-tsy ny nanonitra ny fandaniana be nataony nandritra ny fampielezan-keviny.
Ny mpisolovava izay nanao antso tamin'ny fitsarana ambony dia nanandrana, nefa tsy nahomby, mba hangataka fa ny governemanta dia tokony hatao amin'ny fenitra hafa amin'ny lalàna noho ny olom-pirenena manao hetsika delestazy.
Farany, raha te hahomby ny fifamalian'izy ireo dia mety hisy vokany manasarotra ny fanaovana teratany olom-pirenena izany amin'ny fanjakana. Amin'ny maha-iray amin'ireo karazany voalohany amin'ny faritra misy anay, ny raharaha St.Ange androany dia nisy fiatraikany mifanohitra aorian'ny Fitsarana: manitatra ny haben'ny zom-pirenena hanoherana ny fanapahan-kevitra noraisin'ny sampana mpanatanteraka ao amin'ny Governemanta.
Ny fitsarana omaly dia nanondrotra ny loka ho an'i St.Ange ho vola mitentina 7 tapitrisa ropia, izay nanonitra tamin'ny fomba mandaitra ny ankamaroan'ny fandaniany tsy ara-bola nandritra ny fotoanan'ny fampielezan-keviny.
Ity vola ity dia misy vola mitentina 1 tapitrisa ratra amin'ny fahasimbana ara-pitondrantena, iray amin'ireo vola avo indrindra omena eo amin'ny faritra misy anay noho ny fahasimbana tsy ara-bola hatramin'izao.
Tsy isalasalana fa ho benchmark mampanantena ho an'ireo mpangataka mandroso amin'ny antony mitovy amin'izany ny hetsika.
Mazava ny fahitana Andriamatoa St.Ange, nandao ny lapan'ny fitsarana omaly tamim-pifaliana taorian'ny efa-taona niadiany tamin'ny raharaha teo amin'ny tontolon'ny mpanohitra, niaraka tamin'ny ekipany mpisolovava an'i Seychellois Attorneys, izay misy an'Andriamatoa Kieran Shah, MrsMichelle St.Ange-Ebrahim, ary Andriamatoa Frank Elizabeth.
Solontenan'ny fanjakana Andriamatoa Stephan Knights. Raha nifanerasera tamim-pitiavana Andriamatoa St.Ange, toy ny mahazatra, tamin'ny mpanao gazety tafavory, dia tsy nisy ny fanamarihana avy amin'ny mpisolovava.